Greenify APP ကို ​​အသုံးပြု. ဘက်ထရီ Save | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » Greenify
Greenify APK ကို
1 အကောင်းဆုံး Android App များ (http://goo.gl/2013VMwnE), အန်းဒရွိုက်အာဏာပိုင်ရဲ့ထိပ်တန်း 1 အကောင်းဆုံး Root App များ (http://goo.gl/g3L0qZ) တွင် Lifehacker ရဲ့ထိပ်တန်း0Utility ကိုအဖြစ် Featured ။"တက်ကြွ Doze" နှင့်ပင်အမြစ်မပါဘဲ, အန်းဒရွိုက်6+ ပေါ်တွင်ဘက်ထရီချွေတာတိုးမြှင့်ဖို့ "ဟု Go ကိုအပေါ် Doze"! (အသေးစိတျ setting များကိုရှင်းပြ)
သင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကို installed apps များအများကြီးပြီးနောက် hungrier နှေးကွေးခြင်းနှင့်ဘက်ထရီဖြစ်လာသင့်တယ်ဘယ်တော့မှမ။ ဒါကြောင့်သင်ကရှိခဲ့သည်ပဌမနေ့ရက်ပြုသကဲ့သို့ Greenify နှင့်အတူသင့်ရဲ့ device ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ကိုထာဝစဉ်နီးပါးအဖြစ် run နိုင်ပါတယ်!
သငျသညျတက်ကြွစွာထူးခြားတဲ့လမ်းအတွက်, သင့် device ကိုကျန်ရစ်သို့မဟုတ်ဘက်ထရီ leeching မှသူတို့ကိုရပ်တန့်ဖို့, သူတို့ကိုမသုံးကြသောအခါသင်တို့ကို hibernation သို့ misbehaving app များကိုဖော်ထုတ်ထားကူညီ Greenify! foreground အတွက်အပြေးလာသောအခါတုန်းပဲအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေချိန်မှာသူတို့က, သင်သို့မဟုတ်အခြားအက်ပ်အားဖြင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲဘာမျှမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ XDA ဖိုရမ် (http://goo.gl/ZuLDnE) သို့မဟုတ် G + အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ bugs (http://goo.gl/MoszF) သတင်းပို့ပါ။
Greenify ဘယ်တော့မှစဉ်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းဝန်ဆောင်မှုများ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနေသော်လည်းသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာစုဆောင်းပြုလုပ်ရုံ hibernation လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအလိုအလျောက်ဖို့ကအခွင့်ကောင်းယူ။
အရေးကြီး: app တစ်ခု Greenifying သင်ဤ app ကိုအပေါငျးတို့သနောက်ခံလုပ်ဆောင်ချက်ကို (ဝန်ဆောင်မှုသည် Periodic တာဝန်, ဖြစ်ရပ်ကိုလက်ခံ, နှိုးဆော်သံ, ဝစ်ဂျက်ကို update ကို, တွန်းအားပေးမက်ဆေ့ခ်ျကို) သင်ဒီ app ကိုသုံးပြီးအခါမှတပါး hibernation စဉ်အတွင်းဝန်ဆောင်မှုထဲကဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုသတိထားဖြစ်ကြောင်းဆိုလို။
သင်သည်ထိုသူတို့အပေါ်မှီခိုကြဘူးမဟုတ်လျှင်နှိုးစက်နာရီ app များဖြစ်တဲ့ instant messaging app များကို greenify ဘယ်တော့မှ။ သငျသညျအကြီးအကျယ်မှီခိုအားထားနေ greenified apps များ၏သက်ရောက်မှုကိုအတည်ပြုရန်လုပ်ပေးပေးပါ။
မှတ်ချက်: Greenify အလုပ်လုပ် Auto-hibernation များအတွက်နောက်ခံ running န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာအလွန်ပေါ့ပါးနီးပါးသုည CPU နဲ့ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်နေပါတယ်။
=== ခွင့်ပြုချက် ===
DEVICE ကို ADMIN: ဒီ app ကိုချက်ချင်း Non-အမြစ်ကိရိယာများပေါ်တွင်အလိုအလျောက် hibernation ပြီးနောက်မျက်နှာပြင်ကို turn off ဖို့စီမံအုပ်ချုပ်သူကိုအခွင့်ထူးကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီအခွင့်ပြုချက်လိုအပ်မှသာလျှင်သင့်ရဲ့သဘောတူညီခကျြအဘို့အအတိအလင်းမေတ္တာရပ်ခံပါလိမ့်မည်။
အခြားသတင်းများ APP ကိုအပေါ်တွင်ရေးဆွဲမည်: မျက်နှာပြင်ကိုချွတ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်သည့်အခါအလိုအလျောက် hibernation စဉ်အတွင်းမျက်နှာပြင်မှိန်ရန်။
screen lock & BIND Access ဝန်ဆောင်မှုကိုပိတ်: အော်တို hibernation သည် Non-အမြစ်ကိရိယာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်။
ACCOUNTS GET & SYNC SETTINGS ရေးပါ: ယင်း၏ထပ်တူပြုခြင်းတာဝန်လည်းမကြာခဏလျှင် apps တွေရဲ့အကောင့်ကိုထပ်တူပြုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ပါ။
ဒီ app ကတော့ hibernation လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအလိုအလျောက်ရန်, Accessibility န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။
=== မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ===
* ဒါကြောင့်အလိုအလျှောက် hibernation အလုပ်မလုပ်ကြောင်းပုံရသည်။
* ငါ့အ greenified apps များ (ဥပမာ, Google Maps ကို) ၏အခြို့သော hibernating မဟုတ်ပုံရသည်။
* ငါ system ကို apps များ greenify ချင်!
* De-greenified apps များနေဆဲမျှတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာရပြီ!
=== ဘာသာပြန်စာပေ ===
=== လှူဒါန်းခြင်း ===
သငျသညျ Greenify ချစ်ကြလျှင်, အပိုစမ်းသပ် features တွေများအတွက် "လှူဒါန်းမှုအထုပ်" (http://goo.gl/fpz5l) စဉ်းစားပါ ကျေးဇူးပြု. :
* Greenify စနစ်က apps များ
apps များသင့်ရဲ့ device အပေါ်ပြုမူပုံကိုအကြောင်းကို * In-depth ကိုအသေးစိတျ
ကြောင့် Google Play စသဖြင့်ပြဌာန်းမူဝါဒ, မြဲအကြောင်းကြားစာမှယခုတွင် Android 8.x အပေါ်ပြသနေသည် "Greenify running ဖြစ်ပါတယ်" ။ သင်ကလိုခငျြဘူးဆိုရငျ, (ရှည်လျားသော setting များကိုရိုက်ထည့်ပါရန်အကြောင်းကြားစာကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်) က၎င်း၏အကြောင်းကြားစာအမျိုးအစားကို disable ကျေးဇူးပြုပြီး
App ကို Analyzer ယခုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျွန်းအတွက် apps များကိုထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
ကြောင့် Play Store ကိုအားဖြင့်ပြဌာန်းမူဝါဒ, "သတိပေးချက် Remove မနေပါနဲ့" ကိုမရှိတော့အန်းဒရွိုက် 8 + ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ အဲဒီအစား, Greenify တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု Nevolution plug-in ကိုပေးပါသည်။
ကျွန်းအတွက် apps တွေအတွက် Fixed Non-အမြစ် hibernation ။
avast ရှင်းလင်းရေး & ...